मतदातासँगै चिसोमा शेरबहादुर बसेर, शेखर उभिएरै मत माग्दै - ramechhapkhabar.com
मतदातासँगै चिसोमा शेरबहादुर बसेर, शेखर उभिएरै मत माग्दै
पहिलो चरणको चुनावबाट नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित हुन नसकेपछि काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा दोस्रो चरणको चुनाव भइरहँदा राजनीति तातेको छ तर काठमाडौंमा चिसो बढेको छ ।
दोस्रो चरणको चुनाव गर्न ढिला हुँदा देशभरबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मतदान गर्न चिसोलाई बेवास्ता गर्दै लामबद्ध छन् । सँगसँगै सभापतिका उम्मेदवारद्वय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला समेत चिसोमै मत माग्न व्यस्त छन् । लामबद्ध मतदातासँग सभापति देउवाले कुर्सीमा बसेर मत मागिरहेका छन् भने अर्का उम्मेदवार कोइराला उभिएरै मत मागिरहेका छन् ।
दोस्रो चरणको चुनावमा साँझ साढे ६ बजेसम्म २ हजार १०० मत खसेको छ । दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धीहरू सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीच चुनावी भिडन्त भइरहेको छ ।
पहिलो चरणको चुनावमा कुनै पनि उम्मेदवारले खसेको मतको ५० प्रतिशत मत ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणको चुनाव भइरहेको छ । अब केही घण्टामा मतदान सकेर राति नै मतगणना गर्ने निर्वाचन समितिको तयारी रहेको छ ।
कांग्रेस सभापतिको मतगणना राती १० बजेदेखि
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको सभापति चयनका लागि भइरहेको दोस्रो चरणको मतदान मंगलबार राती १० बजेदेखि सुरु हुने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य ए‍गराज पोखरेलले राती १० बजेदेखि सभापतिको मतगणना सुरु गरिने जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार सभापतिको मतगणना सकिएपछि एक दिन निर्वाचन समितिले आराम गरेर बिहीबारदेखि मात्रै मतगणना सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। मतदान भएपनि निर्वाचन समितिका सदस्य, उम्मेदवार र उनीहरूका प्रतिनिधिलेलगायतले आराम नपाएकाले उनीहरूको आरामका लागि समय छुट्याइएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभागृहमा दोस्रो चरण मतदानको मतगणना हुने भएपनि बाँकी पदको गणना भने पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुनेछ। दोस्रो चरणमा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालामा मात्र उम्मेदवार छन्। प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ पहिलो चरणमा आउट भएका छन्।